रुकुम घटना : सुष्मा-नवराजबीच चौकीमा के सहमति भएको थियो ? (भिडियोसहित) – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /Video/रुकुम घटना : सुष्मा-नवराजबीच चौकीमा के सहमति भएको थियो ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं । मुलक यतिबेला कोरोना महामारीविरुद्ध लडिरहेको छ । दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । सिंगो मुलुकको ध्यान यो महामारीबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भन्ने तर्फ केन्द्रीत छ । यसैबीचमा जाजरकोट–पश्चिम रुकुममा अकल्पनीय घटना घट्यो र सिंगो मुलुकलाई स्तब्ध तुल्याएको छ । एक दलित जातको युवकले गैरदलित युवतीलाई प्रेम गर्छन्, उनीहरुको प्रेम झाँगिन नपाउँदै ओइलिन्छ, अस्ताउँछ ।
जाजरकोटबाट आफ्नी प्रेमिका ल्याउन १५–२० जनाको हुल बाँधेर दलित युवा नवराज बिक पश्चिम रुकुमको चौरजहारी पुग्छन् । चौरजहारीको सोती गाउँमा प्रेमिका ल्याउन गएका नवराजको समूह र उनकी प्रेमिकाकी आमाबीच केही भनाभन हुन्छ, आफ्नी छोरीलाई नदिने आमाले प्रण गर्छिन् । छोरीलाई भित्र जान भन्दै हप्काउँछिन् । यही जेठ १० गते दिउँसो ३–४ बजेको समय थियो । आमाको चिच्याहटपछि नवराजको समूह हच्किन्छ र फर्किन्छ ।
प्रेमिकाको घरको केही तल हुल बाँधेर बसेको समूह र दलितको छोराले आफ्नो छोरी भगाउन आएको भन्दै आमाले गाउँलेलाई गुहार्छिन । गाउँका केही मानिस त्यो समूहलाई लखेट्नका निम्ति आउँछन् र नवराजको समूहलाई तितरबितर पार्छन । केही युवा भाग्छन्, केही भेरीमा हाम फाल्छन् । गाउँलेले घेरेका केही युवालाई प्रहरीको जिम्मा लगाइन्छ । घटनाका प्रत्यक्षदर्शी र नवराजसँग गएका युवाका अनुसार गाउँलेले नवराजलगायत केहीलाई कु टपिट गरेको थिए । ज्यान बचाउन ती युवा भेरीमा हाम फालेको सोती गाउँका गाउलेको भनाइ छ ।
घटना घटेको छ, प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । दलित र गैरदलितबीचको प्रेम सम्बन्धलाई लिएर जातीय रुपमा घटनालाई केही तत्वले उचाल्न खोजेको पनि देखिन्छ । अर्कोतर्फ युट्युव सञ्चालककर्ताले विभिन्न शीर्षकमा घटनालाई तोडमोड गर्दा नागरिक सूचनाको यर्थाथतासम्म पुग्न नसकेको भान हुन्छ । घटनाको बारेमा प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान के छ, अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी बढिरहेको छ, यो घटनाको वास्तविकतालाई प्रहरीले कसरी केलाएको छ ? नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआईजी निरजबहादुर शाहीसँग खेम बमले कुराकानी गर्नुभएको छ ।